ILoft ehlala kwiDowntown Bowling Green - I-Airbnb
ILoft ehlala kwiDowntown Bowling Green
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-18 Sep.
I-600 sq ft indawo yokuhlala yasezidolophini ebekwe kumbindi wedolophu ye-BG, efikelelekayo kwi-WKU nakuzo zonke iindawo ezinomtsalane edolophini. Le bhedi isandula ukulungiswa / isandula kunikwa ibhedi eyi-1, igumbi lokuhlambela eli-1 ligcwele izinto ezongeziweyo ezibandakanya i-wifi yasimahla, ukhuseleko olulawulwayo lokufikelela, iwasher/idryer, iKeurig kunye neStarbucks kcups, indawo yokupaka enikezelweyo, izixhobo zokwakha ezibulala isandi, ecaleni kweMellow Mushroom, iibhloko ezimbini ukusuka. imbali Fountain Square Park kunye ikofu Spencers kunye resturarants ezininzi ezinkulu.
Indawo enefenitshala epheleleyo kumbindi wedolophu iBowling Green kwisithili seSoDo. Iwasha/isomisi, iKeurig kunye neStarbucks k-cups, ikhabhathi enkulu, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya izitya, iimbiza neepani, indawo yokulahla isinki, iwifi kunye ne-smart tv.
Ifanelekile kubaqeqeshi abahambahambayo (SIYABATHANDA ABAHLENGIKAZI OKUHAMBA !!) Iimayile nje eziyi-0.9 ukuya kwiZiko lezoNyango lase-Bowling Green kunye neekhilomitha ezi-2.2 ukuya kwiSibhedlele saseGreenview.
Ababuki zindwendwe bayafumaneka kwimibuzo ngemiyalezo okanye ngemiyalezo yakwa-Airbnb.